Fanentanana PPC Brand - Vidiny ambany, avo lenta
Alatsinainy, Aogositra 29, 2011 Alatsinainy Oktobra 12, 2015 Chris Bross
Noho izany dia miasa orinasa amin'ny tsena tototry ianao. Azo inoana fa midika izany fa mifanohitra amin'ny CPC saro-pantarina tsara ianao amin'ny teny lakile. Na mety tompona orinasa kely eo an-toerana ianao, izay te-hiditra amin'ny dokambarotra an-tserasera fa tsy hahatsapa ho toa manana teti-bola ara-barotra ampy hifaninanana. Rehefa nitombo ny lazan'ny Internet sy ny marketing amin'ny PPC, dia mitombo koa ny fifaninanana, ary izany dia mampandany ny vidiny. Alohan'ny hanapahanao hevitra fa tsy mandeha ho anao ny PPC (na tsy handeha, raha mbola tsy nanomboka ianao) dia diniho ny Fanentanana amin'ny marika.
Raha ny zavatra niainantsika, ny ankamaroan'ny mpanao dokambarotra PPC dia manomboka amin'ny alàlan'ny fanondroana teny lakile izay mifandraika sy mifamatotra akaiky amin'ny orinasany. Raha any amin'ny trano ianao, dia hanolotra teny fanalahidy toy ny 'trano amidy,' 'mividy trano,' sns. Misy dikany tanteraka izany, ary izany indrindra no asain'ny Help Center na torolàlana ho an'ny PPC hataonao. Ahoana raha toa ka mandany vola be loatra ireo teny lakile ireo amin'ny teti-bola isan'andro na isam-bolana tsy maintsy laninao? Ny dingana manaraka hataonao dia ny mitady teny fanalahidy tsy lafo vidy. Raha tokony hanohy hitrandraka ireo teny fanalahidy kely majika kely mitovy amin'ny lafo vidy ireo dia diniho ny fananganana fampielezan-kevitra miorina amin'ny marika fotsiny. Amin'ny 'teny marika', ny tiako holazaina dia ny teny lakile izay miorina amin'ny anaranao.
Ohatra, hampiasa ny asako dite nofinofy TeaFor2.com izahay ary hanao lisitra teny fanalahidy vitsivitsy mifandraika amin'ny marika:
Dite ho an'ny 2
Araka ny hitanao, ireo teny rehetra voalaza eto dia misy ifandraisany amin'ny anaran'ny marika, teafor2.com. Ny famoronana fanentanana marika toa an'ity iray ity dia mitaky fomba lehibe hananganana ny fahatsiarovanao ny marika, ary hanao fampielezan-kevitra PPC mahomby amin'ny vola kely noho ny laninao amin'ny fanenjehana ireo teny lakile malaza kokoa — ary noho izany dia lafo kokoa.
Ankehitriny rehefa manana ny hevitra fototra ao ambadiky ny fampielezana marika ianao dia ireto misy torohevitra vitsivitsy hodinihina rehefa manomboka:
Add Google Sitelinks amin'ny dokao ao amin'ny Fanentanana amin'ny marika, hahafahana mampiditra ireo mpampiasa mankamin'ny tranokalanao sy hanome safidy fanampiny rehefa miseho ny doka misy anao.
Aza adino ny toerana ary fanitarana telefaona, koa. Indrindra raha orinasa kely eo an-toerana ianao. Ny fampisehoana ireo mpampiasa amin'ny toerana misy anao ary manome rohy haingana hiantsoana anao dia afaka manampy amin'ny fampivoarana ny doka amin'ny doka fampielezan-kevitrao.
Ny fampielezan-kevitra amin'ny marika dia tsara ho an'ny orinasan-taona, satria manome safidy fampielezan-kevitra ambany kokoa azo tanterahina mandavantaona. Ohatra, raha mivarotra kojakoja filomanosana ianao dia mety tsy ho liana amin'ny fampandehanana ny dokambarotrao amin'ny ririnina rehefa ambany ny varotrao. Na izany aza, ny fanaovana fampielezan-kevitra amin'ny marika mandritra ny volana rehetra amin'ny taona dia hitazona ny anaranao ho eo, ary koa hitondra ny sasany amin'ireo fifamoivoizana ivelan'ny vanim-potoana rehefa tsy mandeha ny doka fanaonao.
Namorona fanentanana marika ho an'ny ankamaroan'ny mpanjifako aho, ny sasany amin'izy ireo dia mihazakazaka manokana amin'ny teny marika, ary ny hafa kosa izay nanao fampielezan-kevitra Brand miaraka amin'ny fampielezana nentim-paharazana. Amin'ny tranga maro, hitanay fa ny fampielezan-kevitry ny marika dia nihoatra ny an'ny hafa tamin'ny vidiny ambany. Fomba tsara iray hitsambikinana ireo vao tonga PPC nefa tsy mila mandany vola iray taonina, na ho an'ireo mpitantana kaonty PPC mandroso sy za-draharaha kokoa hanavao ny kaonty reraka.
Tags: marikamarketing marikadoka googlefikarohana karamamarika ppcppc marketing
Aug 29, 2011 amin'ny 11: 40 AM
Izay te-hivarotra zavatra iray dia tokony hahafantatra fa mahazo ny fihetseham-pony ny tsirairay. Hanombohana azy, ampiasao ny ahiahy amin'ny lohatenin'ny doka mba hahafahanao mitarika ny fahatsapan'ny mpihaino anao ary hitako koa WebEnrich izay mijery ny tanjon'ny PPC.